लन्डन बच्चाहरु संग | यात्रा समाचार
बच्चाहरू संग लन्डन
मारिएला क्यारिल | | लन्डन, के हेर्ने
त्यहाँ सहरहरू छन् जुन बच्चाहरूसँग धेरै साथीहरूसँग भेट्न जान्छन् किनकि तिनीहरू हिंड्ने, संग्रहालयहरू, गतिविधिहरू, सजिलै नेभिगेट डिजाइन प्रस्ताव गर्दछ ... लन्डन यो जस्तो छ, यो एक हो बच्चाहरु संग भेट गर्न महान शहर। बच्चाहरूसँग यात्रा सजिलो वा सस्तो छैन, तर कहिलेकाहिँ विकल्प यो हुन्छ कि बच्चाहरू हुर्कुन्जेल कुर्नुहोस् र यसरी वर्षहरू बित्दछ।
त्यसो भए कम से कम समय-समयमा, तपाईंले बच्चाहरूसँग यात्राको समय तालिका बनाउनु पर्छ। शंका, डर हटाउनुहोस्, यो कसरी गर्ने सिक्नुहोस् र रमाउनुहोस्। कसलाई थाँहा छ? हुनसक्छ हामी बच्चाहरूसँग छुट्टिहरू आयोजनामा ​​विशेषज्ञ बन्छौं। आउनुहोस् आज हेरौं बच्चाहरूसँग लन्डनमा के गर्ने.
जबकि यो सत्य हो कि आज कोभिड १ p महामारीका कारण धेरै आकर्षणहरू बन्द भइसकेका छन्, हामी यो प्लेग कहिले बित्छौं भनेर निर्धारित गर्न सक्छौं। सत्य यो हो लन्डनमा बच्चाहरूसँग भेट्न धेरै आकर्षणहरू छन् र धेरै निःशुल्क वा सस्ता छन्। हो, हो, त्यहाँ महँगो व्यक्तिहरू पनि छन्, स्पष्ट रूपमा, लण्डन युरोपको सबैभन्दा महँगो राजधानीहरू मध्ये एक हो, तर त्यहाँ छनौट गर्न धेरै कुरा छ।
लन्डनमा बच्चाहरूका लागि निःशुल्क आकर्षण के हुन्? संग्रहालयहरु लन्डनमा धेरै संग्रहालयहरू नि: शुल्क छन् वा चन्दा प्राप्त गर्छन्, तर तिनीहरूलाई आवश्यक छैन। दुर्भाग्यवस केहि समयका लागि सरकार अब उनीहरूलाई भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दछ त्यसैले पहिले नै जाँच गर्नु राम्रो हुन्छ। सब भन्दा लोकप्रिय संग्रहालयहरु मा मान्छेहरु पर्खिरहेका छन्, तर यो अझै पनि यसको लायक छ। बच्चाहरूको लागि लन्डनमा सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरू निम्न हुन्:
प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय: यो विशाल र अद्भुत ठाउँ हो, भिक्टोरियन शैलीमा उही भवनबाट सुरू हुँदै जहाँ यसले काम गर्दछ। त्यहाँ डायनासोर प्रदर्शनी, एनिमेट्रोनिक टी-रेक्स, विशाल कंकाल र अन्तर्क्रियात्मक प्रदर्शनहरू छन्। यो स्कूलको बिदाको समयमा र सप्ताहका दिनमा शान्त हुन्छ। क्रिसमसमा हिउँको रिink्क कराउजेलबाट बाहिर सेट हुन्छ।
ब्रिटिश संग्रहालय: प्राचीन मिस्र सबैभन्दा राम्रो खजाना हो, प्रसिद्ध रोसेटा स्टोनको साथ, तर प्राचीन ग्रीस, रोम र एशियाई सभ्यताहरू पनि उपस्थित छन्। राम्रो कुरा यो हो कि संग्रहालयमा बच्चाहरूको लागि अडियो गाईडहरू छन्। जब तपाईं भित्र खान सक्नुहुन्छ, यो सस्तो छैन।
विज्ञान संग्रहालय: यो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयको अर्को छेउमा छ, यो प्रवेश गर्न स्वतन्त्र छ, र यो उमेर अनुसार बच्चाहरूको लागि दुई क्षेत्रहरू छन्। सानाको लागि त्यहाँ धेरै अन्तरक्रियात्मक विज्ञान गतिविधिहरू छन्। यो सामान्यतया प्राकृतिक ईतिहास जत्तिकै दर्शकहरू हुँदैन त्यसैले यदि तपाईं भीडलाई मन पराउनुहुन्न भने तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ।
V&A संग्रहालय: यो बच्चाहरूको लागि पनि हुन सक्छ यद्यपि अघिल्लो दुई भन्दा बढी होईन। माथि त्यहाँ प्रसिद्ध संगीतकारको कपडाको प्रदर्शन छ र तपाईं लुगामा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, र तल एक कला र डिजाइन प्रदर्शन छ। यसमा अडियो गाईडहरू छन्, यो धेरै शान्त संग्रहालय हो र यसको क्याफेटेरिया राम्रो छ।
टेट आधुनिक: साँच्चै? हो, तपाइँ वाल अफ आर्ट कम्प्युटर प्रदर्शनी मनपराउँनुहुनेछ र यदि तपाइँ डालाई मन पराउनुहुन्छ भने, संग्रह धेरै सुन्दर छ।
यस सूचीमा हामी थप्न सक्छौं कला को राष्ट्रीय गैलरी, जबसम्म तपाइँका बच्चाहरूले कला मन पराउँछन् वा उनीहरूलाई यो संसार जान्न चाहन्छन्। यी प्रसिद्ध संग्रहालयहरूको पछाडि हामी केहि नामहरू लिन सक्छौं धेरै असामान्य संग्रहालयहरु कि बच्चाहरू मा रुचि हुन सक्छ: बाल संग्रहालय, खेल्न को लागी धेरै खेलौना संग प्राणीशास्त्र संग्रहालय, सयौं हड्डी र कंकालको साथ, र क्लिन जेल संग्रहालयk जुन पुरानो र वास्तविक जेलमा काम गर्दछ।
अर्कोतर्फ, निश्चितको लागि एक आकर्षक घटना हो बकिham्घम प्यालेसमा गार्डको परिवर्तन र व्हाइटहलमा घोडचढी सेना। दुबै ११ बजे लिन्छन्, तर वास्तवमा बकिham्घममा परिवर्तन थोरै पहिले, बिहान १०: ,० हो, किनकि वेलिंग्टन ब्यारेक्सका पहरेदारहरू त्यहाँबाट सेन्ट जेम्स पार्कको अगाडि जान्छन् र ११ बजे उनीहरूले ठोस परिवर्तन गरे। यी घटनाहरू मौसम अनुसार फरक पनि हुन सक्छ त्यसैले अनुसूचीहरू जाँच गर्न यो अभिभावकको काम हो।
बच्चाहरू संग तपाईं पनि जान सक्नुहुन्छ ट्राफलगर स्क्वायर जान्नुहोस् नेपोलियन युद्धहरू को समयमा यो युद्धको सम्झना गर्दै। यो मध्य लन्डनमा छ र यसमा एडमिरल नेल्सनको मूर्ति छ जुन संघर्षमा मरे। वर्ग आराम गर्न र हिंड्ने राम्रो ठाउँ हो।
बच्चाहरूलाई के गर्न अर्को राम्रो हिंडडुल गर्नु हो हप अन हप अफ टुर। अधिकांश कारहरू छतविहीन हुन्छन् यदि दिन अझ राम्रो छ भने। टिकटहरू प्राय: लचिलो हुन्छन् र बसले तपाईंलाई शहरको चारैतिर मनोरञ्जनात्मक टिप्पणीको साथ लैजान्छ।
किनकि हामी यातायातको बारेमा कुरा गर्दैछौं ... लन्डनमा बच्चाहरूसँग घुम्न कसरी सजिलो छ? राम्रो प्रश्न। तपाईंले त्यो जान्नुपर्दछ मेट्रो भीडको घडी मा भीड छ (:7::30० देखि :9: .० र साँझ :30: .० देखि :4::30०)। सडकमा माथि र तल जाने केही केहि एलिभेटरहरू छन्, यदि तपाईंसँग झोला वा कार्ट छ भने। डबल डेकर बस बच्चाहरूलाई मनपर्न सक्छ, यद्यपि तपाईंसँग पैसा छ भने ट्याक्सी सँधै सुविधाजनक हुन्छ। वा एक उबर।
यो जान्न योग्य छ कि ११ बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू वयस्कहरूसहित बस, मेट्रो र DLR मा नि: शुल्क यात्रा गर्छन्, तर रेलहरूमा होइन जहाँ तपाईं 11 बर्ष भन्दा कम उमेरको हुनुपर्दछ। लन्डनको वरिपरि घुम्न यो सल्लाह दिइन्छ, अन्तमा, हुनुपर्दछ ऑइस्टर कार्ड वा त्यस पछि केहि अन्य ट्राभल कार्ड सब भन्दा आकर्षण क्षेत्र १ र २ क्षेत्र भित्र छन्। तपाईं पनि सक्नुहुन्छ एउटा बाइक भाँडामा लिनुहोस् बोरिस बाइकको, सबै शहर भर। मलाई थाहा छैन सडकहरू हिंड्न किन्न तर उनीहरू पार्कहरू देख्न राम्रो छन्।
त्यसो भएकोले, लन्डनको किड्डी आकर्षणहरूमा जानुहोस्। को लन्डन आई र समुद्री जीवन एक्वेरियम उनीहरू अत्यधिक सिफारिस गरिन्छ। फेरिस व्हिलमा सवारी आधा घण्टा लिन्छ र मनोरम दृश्यहरू उत्कृष्ट छन्। यो हरेक दिन बिहान १० बजे देखि खुल्छ र अनलाइन टिकट किन्न सल्लाह दिइन्छ। वास्तवमा, त्यहाँ सिफारिस गरिएको कम्बो छ: लन्डन आई, क्रूज र मैडम तुसाद संग्रहालय।
अर्को सिफारिश आकर्षण हो टावर लन्डन उनीहरूको म्याकब्रे कथाहरू, वा लन्डन कोठाहरूs A नदीको किनारमा हिंड्नुहोस् यो पनि थपिन्छ र बस हपमा बस हप छन् बस बस यस पद्धति संग जलपरवाह छन्। त्यहाँ लण्डनमा १० भन्दा बढी डकहरू छन्।
यदि तपाइँका बच्चाहरूले खेलौना मनपराउँछन् भने तपाइँले भ्रमण गर्नुपर्नेछ ह्याम्लीको खेलौना स्टोर, विश्वमा सब भन्दा ठूलोयसका सात फ्लोरहरू सबै किसिमका खेलौनाहरूले भरिएका छन्। यदि तपाइँ लेगो लाई पनि मनपराउनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाइँले पाँचौं तल्लामा जानु पर्छ जहाँ यस ब्रान्डको छ दशक मनाइएको छ।
अर्को आइकनिक लन्डन साइट हो Londes Zoo, एक बर्ष भन्दा एक लाख भन्दा बढी आगन्तुक संग दुनिया मा सबै भन्दा पुरानो। त्यहाँ एक सरीसृप घर, एक एक्वेरियम, सिंह, लेमर, पेन्गुइन, बाँदर र अधिक धेरै छ।
चिडियाखाना भित्र छ रीजेन्ट पार्क, सुन्दर बगैंचाको साथ सुन्दर साइट, प्राइमरोस हिलमा एक सहूलियत बिन्दुको साथ साथै अंग्रेजी राजधानीको सुन्दर दृश्यहरू पनि छन्। कान्छो बच्चाहरूको लागि, खेल्ने राम्रो ठाउँ हुन सक्छ राजकुमारी डायना मेमोरियल गार्डन अफ वेल्स, १२ बर्ष मुनिका बच्चाहरुका लागि, विशाल समुद्री डाकू जहाजको साथ।
वास्तवमा, लन्डनमा असंख्य बगैंचा र पार्कहरू छन्। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, लण्डनले सबै उमेरका बच्चाहरूसँग धेरै चीजहरू हेर्न र गर्नुपर्दछ, तर तपाईंले यो पनि देख्नुहुनेछ कि त्यहाँ धेरै लन्डनका क्लासिकहरू छन् जुन हाम्रो सूचीबाट बाहिर छन्। लन्डनमा बच्चाहरूसँग के गर्ने.
उदाहरण को लागी? वेस्टमिन्स्टर अबे, सेन्ट पल क्याथेड्रल… विशाल, पुरातन, धार्मिक भवनहरू बाहेक उनीहरूले अपील गरे। कहिलेकाँही यो कुन प्रकारका आमाबाबुहरू हुन् भनेर निर्भर हुन्छ। मेरो बुबा, उदाहरण को लागी, इतिहास मन पराउछ, त्यसैले मेरो यात्रा मा सँधै आफ्नो कथा संग सम्बन्धित गन्तव्यहरु सामेल छन्।
अन्तमा, लन्डनमा धेरै छन् थिएटरहरू र जब महामारी बित्दछ तपाईं बच्चाहरूलाई केहि लिन सक्नुहुनेछ बच्चाहरूको संगीत ह्यारी पॉटर जस्तै।
यस श्रृंखलाको बारेमा कुरा गर्दै, तपाईं जहिले पनि शहरबाट केही अलि बाहिर जान सक्नुहुन्छ र स्टुडियोको नजीक जान सक्नुहुन्छ। वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोमा ह्यारी पॉटर। तपाईं तिनीहरूलाई जान्न पनि लिन सक्नुहुन्छ स्टोनहेंज, १ 140० किलोमिटर टाढा, अक्सफोर्ड, Kilometers 83 किलोमिटर टाढा, ट्रेन र बस द्वारा पहुँच योग्य, कस्टवोल्ड्स र यसको रमणीय गाउँ ... र सूची जान सक्छ, तपाईं छनौट। भाग्यले साथ दिओस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » लन्डन » बच्चाहरू संग लन्डन
सान्टा क्लाउज गाउँ
Eguisheim, Alsace मा के हेर्ने